DAAWO SAWIRRO: Ma Ogtahay in madaxda DF Somaliya aysan ka qeybgelin xil wareejinta Duqa Muqdisho +SABAB! | HalQaran.com
Home Wararka Maanta DAAWO SAWIRRO: Ma Ogtahay in madaxda DF Somaliya aysan ka qeybgelin xil...
Muqdisho (Halqaran.com) – Guddoomiyaha cusub ee Maamulka Gobolka Banaadir ahna Duqa Magaalada Muqdisho, Cumar Maxamuud Maxamed (Cumar Finish) ayaa xalay si rasmi ah xilka ugala wareegay Kusimaha Gudoomiyaha Gobolka Banaadir ahna Gudoomiye Kuxigeenka Dhinaca Maaliyadda ee Maamulka Gobolka Banaadir, Ibraahim Cumar Mahadale (Ibraahim Dheere).
Munaasabadda xil wareejinta oo ka dhacday Aqalka Dowladda Hoose Xamar ayaa waxaan ka qaybgalin Madaxda Dowladda Federaalka Somaliya, balse taasi bedelkeeda waxaa munaasabadda buux-dhaafiyay siyaasiyiinta mucaaradka.
Sidoo kale munaasabadan ayaa waxaa goobjoog ka ahaa wafdi ka socday Maamulka Puntland, Xildhibaanada Labada Aqal ee Baarlamaanka Soomaaliya qaarkood iyo Odayaasha Dhaqanka ee Gobolka Banaadir.
Siyaasiyiinta mucaaradka oo qaarkood hadalo ka jeediyay munaasabadda ayaa bogaadiyay Guddoomiyaha Gobolka Banaadir, waxayna ugu baaqeen in si hufnaan ku dheehan tahay uu ugu shaqeeyo bulshadiisa.
Duqa Muqdisho Cumar Finish, oo munaasabadda soo xiray ayaa marka hore ku baaqay in si wadajira loogu duceeyo Gudoomiyihii hore ee Gobolka Banaadir, Cabdiraxmaan Cumar Cismaan (Eng. Yariisow), oo 1-dii bishan u geeriyooday dhaawac culus oo ka soo gaaray qaraxii 24-kii bishii hore ee July ka dhacay Xarunta Maamulka Gobolka Banaadir.
Cumar Finish ayaa tilmaamay in shaqada uu ka sii wadi doono halkii uu uga tagey Eng. Yariisow, isagoona ballanqaaday in hawsha hortaala uu dardargelin doono.
Guddoomiyaha Maamulka Gobolka Banaadir ahna Duqa Magaalada Muqdisho ayaa hoosta ka xariiqay barnaamijkiisa lixda bilood ee soo socoto uu ku shaqaynayo uu xoogga ku saari doono dhinaca amniga, isla-markaana uu furi doono wadooyinka xiran ee magaalada ku yaala.
Ugu dambeyn, Duqa Muqdisho, ayaa ku goodiyay inay qaadi doonaan tallaabo kasta oo ay kaga hortagayan falalka ay soo maleygayan maleeshiyaadka Ururka Al-Shabaab, islamarkaana aanay suggi doonin inta ay ka beegsanayan dadka waxgalka u ah bulshada Soomaaliyeed.
Ururka Al-Shabaabka ayaa lagu tilmaamaa cadowga keliya ee muuqdo ee maanta Soomaalidu leedahay, sida muuqatana waxaa uu dagaal kula jiraa Dowladda Soomaaliya iyo Maamul Goboleedyada Dalka ka jira.
aysan ka qeybgelin xil wareejinta
madaxda DF Somaliya